3 News iyo 21 munaasabadaha muhiimka ah ee ku jira GEO - Xajinta 2019 - Geofumadas
3 News iyo 21 munaasabadaha muhiimka ah ee ku jira GEO - Xajinta 2019
Febraayo, 2019 Geospatial - GIS, Engineering, tabo cusub
Bentley, Leica iyo PlexEarth waxay ka mid yihiin billowgii ugu xiisaha badnaa bilawga bisha February ee 2019. Intaa waxaa dheer, waxaan muujineynaa in aan soo diyaarinnay 21 dhacdooyin xiiso leh oo ku jira habka, kaas oo bulshada oo dhan xirfadlayaashu ka qayb qaadan karaan. Qaar ka mid ah mawduucyada laga hadlayo dhacdooyinkan waa: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, design, CAD iyo sidoo kale IoT.
Weydii Khabiirka - MicroStation CONNECT Edition
Tani waxaa bilaabay Bentley, oo ah beddel qiimo leh oo loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo inta badan u baahan talo ka baxsan taageerada farsamo ee ay bixiyaan buugaagta ama websarooyinka codsiyada. xasuusta waa in aan ka soo kiciyey mid ka mid ah dhacdooyinka ee London, dib marka nidaamka cadastral dalka Central American rabay si ay u haajiraan ka Geographics in BentleyMap set oo ah codsiyada horumariyo, more files 4500 in DGN la versioning taariikhiga ah waa in u mari Oracle astaanta .
Xaqiiqdii waa kalfadhiyo bilaash ah oo loo yaqaan "Weydii Khabiirka", Talaadada saacadda 12 duhur, waqtiga Bariga Mareykanka iyo waqtiga 1 PM London.
Halkan waxaad ku biiri kartaa, si aad u ogaato arrimaha soo socda.
Tusaale ahaan, kuwani waa mowduucyada la qaadi doono toddobaadka soo socda:
Qalabka 12-Feb ee Farsamada WorkSpets iyo WorkSets ee Codsiyada CONNECT
Codsiyada 19-Feb ee socdaalka waxaa lagu sameeyey VBA, BMR iyo MDL
Adeegyada 26-Feb Cloud ee Codsiyada CONNECT Edition
Rafaa Leica Geosystems, ayaa lagu gartaa sanado badan sida mid ka mid ah tiirarka abuurka, maamulka iyo la socodka teknoolajiyada in loo isticmaalaa in lagu taariikhda ka geospatial beerta, nabadgelyada, difaaca, injineernimada dhismaha. Febraayo 7, ayaa ku dhawaaqday in wadashaqeyn la leh SVAB, shirkad loo qoondeeyay horumarinta alaabta loo yaqaan "excavators -oo ka soo jeeda xakamaynta, illaa dareerayaasha iyo kontaroolada-; Waxay bixisay, labaduba waxay soo bandhigeen mid ka mid ah xalalka xakamaynta mishiinada, xoogga saarey waxsoosaarka IXE3 iyo iGW3. Xalkani waa wax ka badan nidaam ku salaysan aqoonsiga Qalabyada Quantum SVAB.
Haddii aan xusuusan, ee icon Leica iXE3 waa hab u ogolaanaya gacanta ku mishiino in 2D iyo 3D usii sare, iyada oo guddi gacanta ku abuuri karaan daydo dhul, la siiyo dabacsanaan ee duurka jooga; Dhanka kale iGW3 ah, waa boos-waqtiga dhabta ah ee jirridda - baaldi dhulka qoda ah, in isbedel si degdeg ah u samaysaa oo iska ilaali waqti la cadeeyo Nigeria saxda ah oo ka mid ah.
Nidaamka soo bandhigay by Leica + SVAB waa Aqoonsiga Tool ah, gebi ahaanba waa wireless - xirmaan via Bluetooth Low Energy (yaban), oo uu awood u leeyahay in lagu ogaado taas oo ah qalab ka mid ah mashiinada ay ka baaraandega la dhigay xagashada, iyo sidoo kale qeexaya nidaamyada ama qalabka lagu daro mashiinka.
Nidaamkaan cusub ayaa lagu dhejiyaa tiknoolijiyada horay loo soo saaray, iXE3 iyo iGW3, taas oo u tarjumeysa maareyn ballaaran oo wax ku ool ah mashiinka warshadaha
Qaar ka mid ah dadka hawlwadeenada ah ayaa isbeddelaya xabbo dhawr jeer maalintii Iyada oo qaabeynta qaabeynta aqoonsiga qalabka, halista qaladka aadanaha waa la tirtiray. Isdhexgelinta xakamaynta mashiinka ayaa micnaheedu yahay in hawlwadeenku kaliya u baahan yahay inuu xoogga saaro guddi
Mid ka mid ah faa'iidooyinka nidaamkan ayaa ah fududeynta hababka loo shaqeeyo mashiinka mashiinka, si loo tirtiro baahida loo qabo bedelida goobaha gacanta. Waxa kale oo ay ka hortagtaa in shaqaale kasta (khabiir ama laylis) isticmaalaan baaldi-falin qaldan, abuurista qashinka waqti iyo soo celin kabxidda sababtoo ah nidaamka waa xiriirka -Send qaylodhaan haddii wadaha ay doorteen qalab aan lahayn module aqoonsi qalab - oo gabi ahaanba la hubiyo. Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinkeeda waxay tahay in ay aqoonsato qalabyada sida baaldiyada jilicsan ee caadiga ah iyo qalabka leysku furfuran karo.
Nidaamka aqoonsiga qalabku wuxuu dejiyaa heer cusub oo ka faa'iideysta macluumaadka uu qalabka shaqada ee mashiinka ku xiran yahay.
Waxaan rajaynaynaa, dhinaca, tayada alaabta this, sida ay ku gaari jidka of Leica, aydnaan ay Co-abuuraha SVAB, kuwaasoo madaxda bixiya waxyaabaha degaanka hydraulic Ugu dhaqsiyaha badan uu waan arki doonaa codsiga nidaamka this iyo faa'iidooyinka ay u keenaya.
Plexscape + Shimbir i
Inta badan waa ogyahay Plexscape in uu yahay horumarinta PlexEarth, oo ka mid ah qalabka asaasiga ah ee xirfadleyda isticmaala nidaamyada CAD-yada ee qaababka waxtarka leh ee mashruucyada AEC (Architecture, engineering and construction). Dhawaan, Plexscape wuxuu la yeeshay isbahaysi la leh TranSoft, marnaba ma joojinayno inuu nala wadaago iskaashi cusub Bird.i; hannaan loogu talagalay helitaanka iyo kormeerida sawirada laga helo satellite-ka ama hawada, kaas oo xog ka helaya goobo muuqaal oo waaweyn sida: AIRBUS, Globe Globe, Bluesky, ama meeraha. Bird.i waxay ku biirisaa helitaanka sawirrada hababka sirta ah, si loo helo xogta tayada sare leh ee hababka iyo suuqa Sare.
Baahida loo qabo in la isdhexgaliyo qodobbada, sida jawaabta dhammaan dhibaatooyinka ku dhaca dhacdooyinka, marka ay qabtaan waxqabad oo ku lug leh sawirada nidaamyo dimoqraadi ah; sida tusaale ahaan: iibsashada sawirada sare (qiimaha sare), khaladaadka naqshadeynta, dib-u-dhaca ama ka shaqeynta sawirro bilaash ah oo xadidan isticmaalka, saxnaan hoose ama kalsoonida.
Marka aan eegno Plexscape, waxaan ku dadaaleynaa inaan bedelno habka injineerada u shaqeynaya mashaariicda dhismaha, injineernimada, iyo dhismaha (AEC) iyaga oo kor u qaadaya faraqa u dhexeeya naqshadeynta iyo dunida dhabta ah. " ayuu yiri. Lambros Kaliakatsos, Aaska iyo Agaasimaha Plexscape.
PlexEarth iyo Bird.i ku abuureen habab shirkadaha yar yar, dhexdhexaad ah ama weyn ee la shaqeeya oo duurka ku ah dhismaha, saliidda, gaaska, macdan ama tamarta la cusboonaysiin karo ka dhigi kartaa isticmaalka images satellite dhufto ee CAD sida AutoCAD gudahood . Waqtiyeysan in xogta geospatial helidda, u ogolaataa user in ay curiyaan CAD updated, la socodka wanaagsan iyo caddaynta dhawaaqa da'ayeen - dhismaha, si fudud oo dhaqso.
Waxaan si adag u aaminsanahay in wadashaqeynteena Bird.i ay u oggolaan doonaan AEC xirfadleyda in ay naqshadaan kalsoonida ugu sareysa waxayna qaadaan nidaamkooda heerka xiga iyaga oo maraya helitaanka faahfaahin dheeraad ah.
Sidee baa loo fulin doonaa habka loo marayo?
Well, Bird.i ugu horeysay waxa uu ka shaqeeya furayay helitaanka-dhamaadka sare imaging, dhanka kale, waxaa lagu yaqaan in ay PlexEarth, flagship ee Plexscape, ayaa kaabayaasha ballaaran ku salaysan daruur oo caan ku in ay qayb qalabka Autodesk, waxay kaa caawin doonaa liiska, qaybinta iyo xulashada images gaar ah oo u baahan xirfad, si ay ka dib waxaa loo isticmaali karaa in geedi socodka design iyo maaraynta macluumaadka, ku salaysan AEC.
Halkaan waxaa ku qoran liiska munaasabadaha la soo sheegay, kaliya dooro mid ka mid ah danahaaga, waxaana kuu geyn doonaa bogga diiwaangelinta.
24 Abriil - Fahmaan faa'iidooyinka khariidadaha daruuriga ah. Fahmidda Dheefaha Mabaadiida ee Muujinta
20 Febraayo- Abuuritaanka guddi hawleed ee gaadiidka leh ArcGIS. Abuuritaanka Hawlgallada Gaadiidka Gaadiidka leh ee ArcGIS
12 Febraayo - Tababarka GIS: OpenUtilities - Febraayo. Tababarrada SIG: OpenUtilities
12 Febraayo - Shaqada caan ka ah ee PostGIS si loo hagaajiyo xallinta dhibaatooyinka taagan. Shaqooyinka Mustaqbalka ee GGG-ga ee Hagaajinta Dhibaatada Maqalka-Xallinta
12 ee Febraayo- Tababarka GIS: Dhisida xaqiiqada EMEA. Tababar SIG: Sifeynta dhabta ah ee EMEA
13 February- Tababarka GIS: OpenRoads - Febraayo.
13 February- Tababarka SIG: Sayniska falanqaynta qaabdhismeedka
27 Febraayo - Cusbooneysiin cusub oo ku saabsan qaabka karti-xirfadeedka tiknoolijiyada casriga ah iyo aqoonta aasaasiga ah ee GEOINT. Cusbooneysiinta Cusub ee Naqshadeynta Tiknoolajiyada Tiknoolajiyadeed ee Geospatial & GEOINT Body Essential of Knowledge
27 ee bisha Febraayo- Casriyeynta casriga cusub ee casriga ah
28 Febraayo - Khadadka ku-meel-gaadhka ah iyo qorsheynta heerka sare ee TBEST. Raacitaanka Gaadiidka Socota iyo Qorsheynta Heerka-joojinta ee TBEST
7 Maarso- Fiiri xogtaada cabbir cusub iyadoo la isticmaalayo Gis 3d. Fiiri xogtaada cabbirka cusub adigoo isticmaalaya 3d Gis
13 March- Isticmaalka indha-indhaynta dhulka si loo kormeero miisaaniyadda biyaha ee maareynta biyaha. Isticmaalida Muuqaalada Dhulka si Loo eego Miisaaniyadda Biyaha ee Maaraynta Basaska
16 ee Abriil- Falanqaynta xogta iyo falanqaynta taxanaha saacadaha iyadoo la adeegsanayo Muuqaalka Xogta Dheeriga ah iyo Falanqaynta Wareegga Waqtiga Isticmaalida Ka Feejigan
12 February OpenRoads Designer: u-habeyn si loo bedelo
Laga soo bilaabo 12 ee Febraayo ilaa 9 ee Abriil- Hordhaca qorshaha BIM 360. Hordhaca BIM 360 Design
14 Febraayo- Warar ku saabsan 3D munaasabado iyo warfaafin. Maxaa Cusub ee 3D & Dhacdooyinka
19 ee bisha February Tilifoonka Teknooloojiga: Hordhaca shirkadda dhismaha
21 Febraayo- Talooyin iyo xirfado ay ku shaqeeyaan xogta dadweynaha. Talooyin iyo Tricks ee Ka shaqeynta Macluumaadka Dadban
27 Febraayo - Nidaamka xawaaraha sare loogu talagalay buundooyinka xawaaraha sare: OpenBridge Designer, xal Bentley BIM. Nidaamka Xawaaraha Sare ee Xiriirada Xawaaraha Sare: OpenBridge Designer, Bentley BIM Solution
5 Maarso- Kordhinta sirdoonka goobta ee codsiyada webka ee wanaajiya khibrada isticmaalaha. Raadinta Sirdoonka Goobta ee Web Apps oo Korreeya Aqoonta Isticmaalaha
13 March- Web Seminar: Isticmaalka ilaha furan ee GIS si loo dhexgeliyo shaqooyinka daba-galka iyo CAD - 13 Maarso 2019. Webinar: Isticmaalka furfuran ee GIS si loo dhejiyo Gobollada iyo CADada Shaqada - 13th March 2019
Post Previous«Previous Geotech + Dronetech: waa inaadan seegin
Post Next Sidee ayaan wiilkayga uga soo baxay VenezuelaNext »